Slovakia ichangoburwa EU nyika yekuraira kuvharika kune vasina kubayiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Slovakia Kupwanya Nhau » Slovakia ichangoburwa EU nyika yekuraira kuvharika kune vasina kubayiwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Slovakia Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mumazuva mashoma apfuura, Slovakia yakaona huwandu hwehutachiona hutsva, kusanganisira vanopfuura zviuru zvisere neChipiri, nezvipatara zvichishaya nzvimbo yekurapa varwere veCOVID-8,000.
Slovakia iri kutsvaga kudzivirira kutangazve kwehuwandu hwehutachiona hweCCIDID-19 uye kugamuchirwa muchipatara munguva yechando.
Slovakia ine imwe yemhando dzakadzikira dzekudzivirira muEuropean Union, paine vanopfuura makumi mashanu muzana vanhu vasati vabaiwa.
Nyika inosvika 5.5 miriyoni kusvika pari zvino yangoisa vanhu miriyoni mazana maviri nemazana mashanu majekiseni ekurwisa hutachiona.
Sezvo Slovakia ichitsvaga kudzivirira kutangazve kwehutachiona hwekoronavirus uye kugamuchirwa muchipatara munguva yechando, mushure mekutaura huwandu hwenyaya dzehutachiona hweCCIDID-19 nguva pfupi yadarika, Mutungamiriri wenyika, Eduard Heger, akazivisa "kuvhara kwevasina kubayiwa" nhasi.
Mumazuva mashoma apfuura, nyika yeEurope yakaona huwandu hwehutachiona hutsva, kusanganisira vanopfuura zviuru zvisere neChipiri, nezvipatara zvichishaya nzvimbo yekurapa varwere veCOVID-8,000.
Heger akazivisa zvirambidzo zvitsva pamusangano wevatori venhau neChina, kugadzira Sirovhakiya zvichangoburwa European Union nyika kuti iite zvirambidzo zvekuvhara kune vanhu vasina kuve neCOVID vaccine jab.
Zvirambidzo zvitsva muSlovakia, izvo zvinotanga kushanda nemusi weMuvhuro, Mbudzi 22, zvinoda kuti vanhu vange vachibaiwa kana kuti vapora kubva kuCOVID-19 mumwedzi mitanhatu yapfuura kuti vapinde mumaresitorendi, zvitoro zvisina kukosha, kana zviitiko zveveruzhinji.
Slovakia ine imwe yemhando dzakadzikira dzekudzivirira muEuropean Union, paine vanopfuura makumi mashanu muzana vanhu vasati vabaiwa. Nyika inosvika 50 miriyoni kusvika pari zvino yangodzivirira vanhu vanosvika miriyoni mazana maviri nemazana mashanu ekurwisa hutachiona.
Pakutanga vhiki ino, Ositiriya yakava nyika yekutanga kuisa zvirambidzo kune vanhu vasina kubayiwa, sezvo yaitsvaga kudzikisira kumanikidzwa kuzvipatara nenzvimbo dzekuchengetedza emergency. Danho iri rakatanga kushanda pakati pehusiku nemusi weMuvhuro kune chero munhu ane makore gumi nemaviri zvichikwira asina kuwana vaccine yavo yeCOVID-12 kana kuti achangobva kupora kubva kuhutachiona.
Nyika yeGermany yeBavaria uye Czech Republic yakatevera Austria mukurambidza kupinda kwevanhu vasina kubayiwa. Vanhu chete vanogona kuratidza humbowo hwekudzivirira kana kuti vachangobva kupora kubva kuCCIDID-19 ndivo vachabvumidzwa kupinda munzvimbo dzeveruzhinji, dzakadai semaresitorendi, matheatre, mamuseum nezvitoro.